सन् २०२०: यस वर्षको आविष्कार
यतिबेला प्रकाशकहरू नयाँ नयाँ आविष्कारको खोजीमा छन् । बालबालिका केन्द्रित यो आविष्कारलाइ टाइम म्यागेजिनले वर्षको शीर्ष १०० आविष्कारको सूचीमा राखेको छ तर के यसले बजार पिट्ला ? धेरैको यस्तै प्रश्न छ । उसो भए यो के हो त ? इन्टरनेट…
एक आलस्यको क्षणमा म एउटा क्युरियोको दोकानमा घुम्न लागेको थिएँ । तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, अचेल पेरिसमा क्युरियोका सामग्रीहरू किन्ने एउटा फेसन नै भएको छ । पुराना कलाकृति, पुराना विचित्र वस्तु हात पार्ने सौख एउटा साधारण मानिसलाई पनि हुन्छ ।…
बालबालिकाको अत्यधिक डिजिटल मिडियाको प्रयोग अभिभावकहरूका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यो चुनौती चिर्न कस्ता नियम लगाइनु जरुरी छ ? बालबालिकाको 'स्क्रिन टाइम' मुद्दा किन बनिरहेको छ ? पहिलो पुस्ताको आइफोनले बजार पिटेको मात्र १३ वर्ष…
किन दुख्छ मलाई त्यस बन्दी घोडाको आँसु?
“यी आखाँका आँसुहरूले तिमीलाई केही भनिरहका छैनन्?” लगभग तीन वर्षका लागि म र मेरा साथीले गाउँमा एउटा सानो घर भाडामा लियौँ । ठूलो चउरको किनारामा उभिएको त्यो घर सिधै पहाडतर्फ दर्गुन तम्तयार परेजस्तो देखिन्थ्यो । केही टाढा रहेको पहाड र…
अनुवादकः शान्तदास उहिले-उहिलेको कथा हो यो । कथाचाहिँ कोसाभित्रका पाँच गेडा केराउको हो । वास्तवमा ती केराउ बडो अनुशासनका साथ मिलेर रहेका थिए, पल्टनका जवानहरूजस्तै लाइन मिलेर आ-आफ्ना ठाउँमा डेग नचली खडा रहेका थिए । कोसो हरियो थियो र…
मूल : कविता महाजन अनुवाद : गोविन्द गिरी प्रेरणा स्त्रीहरू डराउॅंछन् एक्लै दुक्लै हुंदा अँध्योरोसँग....जगमग उज्यालोसँग डराउँछन् अपरिचित-सुपरिचित छिमेकीहरूसँग । मध्याह्नमा ढोकाको घण्टी बज्दा राति टेलिफोनसँग-नपढिएको आ.वा.सँग…
६ करोड डलर अग्रिम भुक्तानी गरी किनिएको अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको नयाँ पुस्तक ‘अ प्रमिस्ड ल्यान्ड’ले पहिलो दिनमै अमेरिका र क्यानडामा मात्रै ८ लाख ९० हजार प्रति बिक्रीको कीर्तिमान बनाएको छ । हार्डकभरमा निस्किएको यस…
इतिहासमा कयौँ सुफी सन्त र कवि जन्मिए । तीमध्ये केही कविका रचनालाई निकै रूचाइएको छ । केही सन्तका कविता कतै हराए तर जलालुद्दिन रूमीका कविताहरू भने उनको मृत्युको ९०० वर्षपछि पनि उत्तिकै चाखका साथ पढिँदैछन् । १३ औँ शताब्दिका महान्…
सेप्टेम्बरको अँध्यारो रात । जेम्सवोका डाक्टर किरिलोभको एउटै छ वर्षे छोरो आन्द्रेई डिप्थिरियाले मर्‍यो । डाक्टरकी पत्नी गहिरो शोकमा परेकी थिइन् । मृत बालकको पलङमुनि उनी बसेकी थिइन् । यति नै बेला ढोकाको घण्टी जोरले बज्यो । डिप्थिरिया…
123 … 17 पछिल्लो